I-Q & A: UBrett Ineson, uMongameli we-Animatrik-NAB Bonisa iindaba nge-Broadcast Beat. Umsasazo osemthethweni we-NAB Bonisa, uMvelisi we-NAB Bonisa LIVE
ikhaya » Okufumaneka » Q & A: UBrett Ineson, uMongameli we-Animatrik
Q & A: UBrett Ineson, uMongameli we-Animatrik
UMongameli kunye ne-CTO yentsebenzo bamba i-studio i-Animatrik ixoxa ngokusebenza kwinqanaba elikhulu lemveliso eyenziwa ngokubanzi - Warcraft
Uqala njani ukubandakanyeka kwishishini lokuthungatha ukusebenza?
Ndandithanda kakhulu ngeentlobo zokubakho ukususela ekubeni ndandineminyaka eli-10 ubudala. Abazali bam babenomdla wokundityhila kwindawo epholileyo ebomini babecinga ukuba bayandithanda, ngoko bandithumela kwikampu yasehlobo laseToronto. Ndifumene indlela eya kwi-animation kunye ne-TV yokusakaza, apho sathatha iincwadi ze-flip kwaye sisebenzisa iikhamera ze-8mm ukuze siyeke ukuhamba-sizama abantu abaphilileyo kunye nemifanekiso.
Ukukhathazeka malunga nezobomi kunye nesayensi yekhompyutheni, umama nobaba bam bancede bancedise kumashishini. Ndinezemfundo yeprogram ephakamileyo esikolweni ngaphambi kokuba ndiye esikolweni esiphakeme! Emva kokuba ndiphumelele iYunivesithi ndaya kwiVancouver Film School kwiprogram yabo ye-3D.
Ndaphumelela kwaye ndafika emsebenzini wam wokuqala kwi-Mainframe Entertainment, esebenza kwi-3D yokuqala ye-TV ye-animated TV show. Ukufudukela kwinxaxheba kuMlawuli oyiNtloko wezobuGcisa, i-Mainframe ngokukhawuleza yabetha umboniso Sony Ukuzonwabisa okubizwa ngokuba yi-Heavy Gear. Enye yeemfuno eziphambili ze-show yenziwa ukuthuthwa kwesindululo. Ngaloo nto, ndaba ngumnye wabantu bokuqala ababhaptizwa kwezobugcisa. Ndithandana nayo.
Kutheni uqale u-Animatrik?
Kwixesha elidlulileyo ndasebenza kumenzi wekhamera zenkampu zenkampu, ndabancedisa ukuba bamise i-demos ezininzi. Ndibe ngumhle kakhulu ekumiseni iinqanaba zokubanjwa kwinqanaba kwiimeko ezinobungozi, kodwa olu buchule luchaza nokuhamba ezininzi. Ndadlulela ekuncedeni ukuzimela kwaye ndazifumana ndenza umsebenzi wokubamba ukunyakaza kwimihlaba efana neFiji, e-Italy, eNew Zealand, kwaye kunjalo los Angeles. Kwafika ixesha lokuba ndifuna ukutshala ezinye iingcambu. Ndavula i-Animatrik ukunceda ndihlale kwiVancouver kwaye ndisebenze icandelo elikhulayo apha.
Iyiphi iprojekthi yokuqala ye-Animatrik? Yaye yintoni eyinzima kuwe?
Iprojekthi yokuqala yayiyiSithili 9, kodwa iWarcraft yayinzima kakhulu! Kwakuyimizamo emikhulu yokuvelisa imveliso esele yenziwa, kwaye ndicinga ukuba iya kuhlala ide ukuveliswa kuqale kwi-Avatar 2. Kunzima ngokwenene kwiprojekthi yakho ukuba ibe neminyaka emithathu okanye emine igijime phezulu kule ntsimi, ingakumbi xa iteknoloji iya phambili ngokukhawuleza.
Yintoni ekukukhenkce ngayo ngokuthathwa kwesikhala?
Ndandinomdla weekhamera ezikhulayo, kwaye ndaze ndafumana umsebenzi njengomncedisi wekhamera kwimifanekiso. Ukubanjwa kwesigxina kukuxubusha isayensi yekhompyutheni, izilwanyana kunye neekhamera kunye, ngoko ndakwazi ukulandela yonke into endiyithandayo.
Yintoni oyibonayo kwikamva lokubanjwa kwesikhalazo?
Sibona imfuno ikhula rhoqo. Ifinyelelwe kwinqanaba esingayibizi kwakhona ukukhutshwa kwesikhalazo, sikubiza ngokuba yinto yokubanjwa, kuba sizama ukurekhoda isitshixo somdlali. Ixesha elizayo ngokumalunga nokuhamba kwiinkcukacha ezincinci zomzimba, ngoko ke sinokuqokelela idatha eninzi eqhubekayo kwinto eyenziwa ngumdlali.
Kuza kubakho ubuchwepheshe obusakhulayo obuza kuhlaziywa kwaye buyenze ukuba bube bubiza, kodwa kukho ubuchwepheshe be-emerging all about the resolution and integrity to photorealism.
Yaye niyiphi ingcebiso onokuyinika abantu ngabanye abazama ukunikezela ngokubanjwa kwesikhalazo?
Ukuthathwa kweNtsebenzo yinkampani encinci, i-niche. Fumana inkampani ekujoliswe kuyo. Abanye banokuba neeprogram ze-internship, kodwa njengawo nawuphi na umsebenzi osekelwe kwimveliso, kufuneka ufumane nayiphi indlela!
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Inkundla ye-Ultra HD Injini yeVidiyo	2017-05-22
Previous: Injineli yeProjekti, ukuFunyanwa kweVidiyo kunye noKuxinzelelo olufanayo njengangaphakathi
next: I-Austrian news channel ye-OE24 TV emoyeni kunye neCinegy
Hey Buddy !, Ndifumene le ngcaciso kuwe: "Q & A: Brett Ineson, uMongameli we-Animatrik". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/qa-brett-ineson-preim-animatrik/. Enkosi.